Hydroxyprogesterone caproate powder (630-56-8) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Hydroxyprogesterone caproate upfu
Rating: SKU: 630-56-8. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika kuhuwandu hwe Hydroxyprogesterone caproate powder (630-56-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Hydroxyprogesterone caproate powder inogadzira steroid kemikari yakafanana ne medroxyprogesterone acetate uye megestrol acetate. Icho chinobva kune ester ye17α-hydroxyprogesterone yakaumbwa kubva ku caproic acid (hexanoic acid). Hydroxyprogesterone caproate yakambotengeswa pasi pezita rechiratidzo MAKENA.
Hydroxyprogesterone caproate powder Basic Characters
Name: Hydroxyprogesterone caproate powder
Molecular Kurema: 428.6
Kemikari Mazita: Hydroxyprogesterone caproate powder
Mazita emagetsi: Hydroxyprogesterone caproate (OHPC) powder, Delalutin powder, Proluton powder, 630-56-8
1) Kutanga kutora prophylaxis mune vakadzi vane pamuviri we singleton vane nhoroondo ye singleton nguva yokutanga yokuberekwa.
Dhiyabhorosi (inosara uye mibare yakawanda yeMakena chete)
Vakwegura uye Vachiri kuyaruka vakadzi vane pamuviri 16 makore nemakore
250 mg (1 mL) IM kamwe kamwe nevhiki (mazuva ose e7). Tanga kurapwa nguva ipi zvayo pakati pevhiki dze16 uye mazuva 0 ekudzivirira kusvika kumavhiki e20 uye mazuva 6 ekudzivirira. Rambai kamwe chete vhiki nevhiki kusvikira muvhiki 37 (kuburikidza nevhiki dze36, mazuva e6) ekugwinya kana kuburitsa, chero ipi zvayo inotanga kutanga. Kubudirira kwehydroxyprogesterone kunobva pakuvandudzika kwehuwandu hwevakadzi vakapa mavhiki mashoma kupfuura 37 ekugumira. Hapana mimwe miedzo yakarongedzwa inoratidzira zvakananga kuchipatara zvakabatsirwa, zvakadai sekuvandudza muhutachiona hwekushaya vana uye kuora. KUSARUDZWA KUSHANDISWA: Hydroxyprogesterone haisati yashandiswa kuti ishandiswe kuvadzimai vane maitiro akawanda kana zvimwe zvinokonzera ngozi yekuberekwa kwekutanga.
Subcutaneous dosage (Makena auto-injector chete)
275 mg (1.1 mL) pasi pechikamu kamwechete kwevhiki (mazuva ose e7). Tanga kurapwa nguva ipi zvayo pakati pevhiki dze16 uye mazuva 0 ekudzivirira kusvika kumavhiki e20 uye mazuva 6 ekudzivirira. Rambai kamwe chete vhiki nevhiki kusvikira muvhiki 37 (kuburikidza nevhiki dze36, mazuva e6) ekugwinya kana kuburitsa, chero ipi zvayo inotanga kutanga. Kubudirira kwehydroxyprogesterone kunobva pakuvandudzika kwehuwandu hwevakadzi vakapa mavhiki mashoma kupfuura 37 ekugumira. Hapana mimwe miedzo yakarongedzwa inoratidzira zvakananga kuchipatara zvakabatsirwa, zvakadai sekuvandudza muhutachiona hwekushaya vana uye kuora. KUSARUDZWA KUSHANDISWA: Hydroxyprogesterone haisati yashandiswa kuti ishandiswe kuvadzimai vane maitiro akawanda kana zvimwe zvinokonzera ngozi yekuberekwa kwekutanga.
2) Kurapa kwekushaya simba, kanowedzera, uye mastraineti yemagamusi ekupedzisira.
1,000 mg kana zvimwe pavhiki IM (kureba 1 gram IM kamwe kamwe chete kwevhiki ku1 gram IM kamwe zuva nezuva). Rambai mushure mokudzoka zvakare, kana mushure memasvondo e12 musina mhinduro. Inogona kushandiswa muhutatu hwakakonzerwa nemamwe maitiro anticancer therapy (chirwere, mazairo, kana chemotherapy, kana kusanganiswa kweizvi). Mishonga inogadziriswa yakataurwa kusvika kusvika iye zvino yave iri nani muhutano hwake hwakanyatsosiyana-siyana hwemakemikari adenocarcinoma.
3) Kurapa kwe amenorrhea (kutanga kana kuti yechipiri) kana kuti kusakosha kweutterin kubuda ropa nekuda kwekusaenzana kwemahomoni musipo kwehutano hwehupenyu.
Vakwegura uye vechidiki vakadzi
375 mg IM senzira imwe chete, inopiwa chero nguva. Nhamba inotevera inogona kutanga mushure mezuva re4 rekutsvaga kana, kana pasina kubuda ropa, mazuva e21 mushure mekutanga kwesero rimwe chete. Kana pasina mhinduro shure kweCNUMX miitiro, rega. Nhamba yezvishandise zvinoshandiswa uye nguva yekushandisa cyclic dosing inobva pane zvinoratidza kushandiswa uye kana chirwere chestrogen chiri kushandiswa panguva imwe chete. Izvozvo zvinoratidza kuti maitiro e-estrogen anotevera ((4-day cycle), anodzokorora masvondo ose e28) Zuva 4 roga roga: Estradiol Valerate Injection (1 mg IM); zvino, mavhiki e20 mushure meZuva 2: Hydroxyprogesterone caproate powder 1 mg IM; ipapo Estradiol Valerate (250 mg IM) masvondo 5 mushure meZuva 4: Iri ndiro Zuva 1 rekuzotevera. Dzokorora sezvinoratidzwa. Kana isrogen inoshaya yakagara kwenguva refu kune varwere vane amenorrhea, kuenda kumwedzi hakugone kuitika kusvikira isrogen yakapiwa kwemwedzi inoverengeka. Rega kugadzirisa kana bhizinesi recyclic risingadi.
Kuedza kugadzirwa kwesrogen isingaperi ("Medical D uye C").
250 mg IM kamwe; dzoka kuti uve nechokwadi pamasvondo e4 mushure mejojo ​​yokutanga. Rambai mushure mekuita kwechipiri chiremba. Kushambadzira kunofanira kuitika 7 kwemazuva 14 mushure mejojo.
Warning on Hydroxyprogesterone caproate powder
Hydroxyprogesterone caproate injection yeropa, kusanganisira mishonga yakakanyiwa, inosangana nechinangwa chekurapa chinodiwa kana ikashandiswa kuderedza dambudziko rekuberekwa kwepakutanga mune nhengo yevakadzi uye Zvose zvinotevera zvinosangana:
1. Nhengo yacho ine chirwere chazvino chekuimba.
2. Nhengo yacho ine chinyorwa chinyorwa chekare chinyorwa chekutanga chisingabatanidzwi chinenge chichiitika panguva isiri yevhiki ye37 gestation nemhaka yekushanda kwepamberi yekushanda kana kupera nguva isati yasvika.
3. Nhengo haina kumbove yakamboshanda basa kana kuti kupera nguva isati yasvika panguva yekudzivirira.
4. Mishonga inotangwa pakati pevhiki dze16, mazuva e0 uye mavhiki e20, mazuva e6 ekuberekwa.
5. Majekiseni haafaniri kutarisirwa kakawanda kupfuura vhiki nevhiki kusvika kwemavhiki e36 ekugumira kana nguva yekutora (chero ipi inotanga kuitika pakutanga) kwepamusoro weiyo isiri yeiyo 21 injections.
6. Dose haipfuuri 250 mg mujojo.
Izwi remakemikari yeHydroxyprogesterone caproate powder inobata-4-ene-3,20-dione, 17 [(1oxohexyl) oxy]. Iine chimiro chechimiro cheC27H40O4 uye molecular uremu hwe428.60. Hydroxyprogesterone caproate powder iripo yakachena kune zvigadzirwa zvitsvuku zvemakristasi kana pfuda ine chinyauka che 120 ° -124 ° C.
Hydroxyprogesterone caproate powder nzira yekuita: iyo nzira iyo progesterone inodzivirira kutanga kuberekwa isinganzwisiswi, asi nzira dzakawanda dzinowanzobatanidzwa.Progesterone inobatanidzwa basa rinokosha mukugadzirisa kwehutano hwekuberekwa kwevakadzi uye inokosha pakubudirira kwekuiswa kweiyo embryo nekuchengetedza yekuzvitakura. Iro inoshanda nekusungirirwa kune progesterone receptors mu chibereko, mazai, mazamu uye mukati memutambo wenheyo. Izvi zvinowanikwa mune 2 isoforms, PR-A uye PR-B. Progesterone inosungirirwa kune idzi zvinogadziriswa inozopedzisira inotungamirira kumagadziro emagetsi ekunyorwa. Izvi zvinoguma mune zvinopesana nekupisa simba zvinosvibisa hutachiona hwehurumende hunoitika nekugadzirwa kwebasa, uye hunochengetedza hutachiona hunoita kuti hugadzikane nekugadzirisa progesterone inoshandisa myometrium.
Pharmacodynamics ye Hydroxyprogesterone caproate powder: Hazviongorori zvakadzama zvemapromodynamic zvakaitwa kuongorora Hydroxyprogesterone caproate powder injections. Zvisinei, iyo nzira yekuita inogona kunge yakabatana nekuwedzera kwekubatana pakati peprogesterone ne progesterone receptors.
Hydroxyprogesterone caproate powder hafu yeupenyu ndeye 16 mazuva (± 6 mazuva).
Nzira yekutenga Hydroxyprogesterone caproate powder kubva kuAASraw